Tag: donhwe » Martech Zone
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Ecommerce Mutengi Ukama Hukama Management manejimendi inogadzira hukama huri pakati pezvitoro zveecommerce nevatengi vavo zviitiko zvisingakanganwike zvinotyaira kuvimbika nemari. ECRM inorongedza simba rakawanda kupfuura iyo Email Service Provider (ESP) uye yakanyanya-kutarisa kune vatengi kupfuura yeCustomer Relationship Management (CRM) chikuva. Chii chinonzi ECRM? ECRM dzinopa simba varidzi vezvitoro zvepamhepo kuti vanzwisise mutengi wese akasarudzika - zvavanofarira, zvavanotenga, uye maitiro - uye vanounza zvine hunyanzvi, zvakasarudzika zviitiko zvevatengi pachiyero nekushandisa yakaunganidzwa data revatengi pane chero yakasanganiswa yekushambadzira chiteshi.
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Tichifunga nezve kutonga kweWordPress seyakagadziriswa manejimendi sisitimu, zvinoshamisika kushomeka kwekutarisirwa kunonyatso kubhadharwa mupuratifomu yepamoyo pane chaidzo shanduko. Anenge mabhuku ese - ingave iri bhizinesi kana rako bhurogu - rinotarisa kushandura vashanyi kuva vanyoreri kana tarisiro. Nekudaro, hapana chaicho zvinhu mukati meplatform chikuva chekutora chiitiko ichi. Chinja Pro ndeye yakazara WordPress plugin iyo inopa yekudhonza & kudonhedza mupepeti, nhare inopindura
Muvhuro, July 13, 2020 Mugovera, October 24, 2020 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Mawebhusaiti ayo anowedzera mhenyu humbowo hwemagariro mabhenji anosimudzira iwo maitiro ekushandurwa uye kuvimbika kwavo. Pulse inoita kuti mabhizinesi aratidze zviziviso zvevanhu chaivo vari kutora matanho pane yavo saiti. Pamusoro pewebhusaiti zviuru makumi maviri zvinoshandisa Pulse uye uwane avhareji kutendeuka kuwedzera kwe20,000%. Iyo nzvimbo uye nguva yezviziviso zvinogona kugadziridzwa zvizere uye, ivo pavanobata kutarisisa kwemushanyi, ivo havatsause kutarisisa kure nechinangwa icho mushanyi aripo. Zvakanaka
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Mumwe wevatengi vedu ari paScarespace, yemukati manejimendi sisitimu iyo inopa zvese zvekutanga - kusanganisira ecommerce. Kune vanozvishandira-vatengi, ipuratifomu yakanaka ine dzakawanda sarudzo. Isu tinowanzo kurudzira yakapihwa WordPress nekuda kwekusagona kwayo kugona uye kushanduka ... asi kune vamwe squarespace isarudzo yakasimba. Ipo squarespace ichishaya iyo API uye mamirioni ezvibatanidzwa zvakagadzirwa izvo zvakagadzirira kuenda, unogona achiri kuwana mamwe maturusi anoshamisa ekuvandudza yako saiti. Isu